Emva kokhetho lwePatriots ‘ngaphandle, iiBhili ziZinto eziFunwayo ukuze uphumelele kwi-AFC eMpuma – CYMRU
Emva kokhetho lwePatriots ‘ngaphandle, iiBhili ziZinto eziFunwayo ukuze uphumelele kwi-AFC eMpuma
No Comments on Emva kokhetho lwePatriots ‘ngaphandle, iiBhili ziZinto eziFunwayo ukuze uphumelele kwi-AFC eMpuma
Ukusukela ngo-Matshi, xa uTom Brady wayeshiya i-New England Patriots kunye nee-Buffalo Bill zenza izinto ezininzi ezibalulekileyo, iindawo zokubheja ze-NFL ziye zahlangana phakathi kwala maqela mabini njengezintandokazi zokuphumelela kukwahlula i-AFC East.
Ngasehlotyeni, iiBhili zaqhubela phambili kunye neencwadana zemidlalo ezikwi-intanethi kuphela ukubona amaPatriots ebuyela phezulu kwezintandokazi zesahlulo emva kokutyikitya uCam Newton ukuba “akhuphisane” kwinqanaba labo lokuqalisa ikota.
Nangona kunjalo, kanye njenge-opera yesosi yemihla ngemihla enejusi, ukungathandani kunye nokuziva esidlangalaleni kuye kwaguquka kwakhona. Kwaye kufana ne-opera yesepha ephambili ebuyayo ekufeni okuthile, iiBhili ziyabuya njengezinto ezingathandekiyo ekuthandeni ukupambana.
Nangona kunjalo, ayingenxa yokuthengwa kwabadlali ukuba iMithetho eshukumiweyo kwaye iiPatriots ziwele phantsi i-notch eneempawu ezingafanelekanga. Endaweni yoko, kungenxa yabo bonke abadlali bebhola abaphuma ngaphandle kwexesha lama-2020.
Ngeenkxalabo zempilo ezisaqhubeka nokudubaduba kwilizwe, iNFL ne-NFLPA zavumelana ngaphambi kweenkampu zoqeqesho zokuba abadlali bavunyelwe ukuphuma kweli xesha lonyaka.
Ukuza kuthi ga ngoku, alikho elinye iqela elinabadlali abaphume ngaphandle kweNew England Patriots. Olu hambo alubange lubangele ukuba iisayithi zokubheja ezikwi-Intanethi zibuze amathuba eNew England kulo nyaka, abalandeli be-bun kunye neepundits ngokunjalo.
Makhe sihlolisise ezi zinto zingathandekiyo zebhola kwaye nibone ukuba olu lawulo luphathelene ngokwenene na nokuba iiPatriots ziya kuphumelela kwakhona.
I-AfC East Betting Odds
Ezi zinto zingathandekiyo zilandelayo ziqhutywa ngoncedo lweBetOnline:
I-Buffalo Bills (+100)
I-New England Patriots (+160)
I-Miami Dolphins (+700)
I-New York Jets (+900)
I-New York Jets yeyona nto ibalulekileyo kwi-AFC East kulo nyaka kwaye ibiphambi kweeveki ezimbini ezidlulileyo apho iqela lalahlekelwa ngabadlali babo abathathu abaphambili.
Kuqala, iJets yarhweba ngeJamal Adams kwiiSeattle Seahawks, ezashiya isikhala esikhulu kwisibini sabo. Ungayichazanga, wayeyinkokeli ebaleni kunye nenxalenye yempumelelo yezokhuseleko.
Ngethamsanqa kwiqela, bafumana into enkulu ebabuyayo kubandakanya ukhetho lokuqala lomjikelo. Kodwa, oko akuncedi ngeli xesha lonyaka.
Enye ilahleko ephambili kwiqela xa babekhupha enye yezona zinto zabo zacaphukisayo kwiBrian Winters yokonga imali. Ukwenza le ntshukumo ixhoma nangakumbi yinto yokuba iWinters kuthiwa isayina neeBhili.
Okokugqibela, i-Jets ephezulu ye-defender linebacker CJ Mosely ikhethe ixesha lonyaka. Ishiya iphelele phakathi kukhuselo olungayi kutshintshwa ngokulula. UMosely ngomnye wabadlali ababaluleke kakhulu kwiNFL ukuhlala ngaphandle kwi-2020 isizini.
Ngokulahleka kwaba bakhuseli babini, kunye neqela elinqabileyo labadlali abanesakhono sokukhubeka, iJets ngokulula lelona qela libi kuloluhlu.
I-Vegas ineeJets ukuphumelela iyonke kwi-Over / Under of 6.5 win. I-Under iyathandwa ngo-130 ngokungangqinelani kwaye kuya kufuneka ndivume.
Ngokungafaniyo namanye amaqela ase-AFC eMpuma, iiDolphins azinabo abadlali abaphume kolu lwimi. Ngapha koko, baliqela lamaqela asibhozo kwi-NFL iphela ukuze angaphulukani nomdlali kwisolotya lokuphuma.
Kuwo onke amaqela ase-AFC eMpuma, iiMiami Dolphins zezona zininzi ziphezulu ngenxa yerekhodi ye-5-11 yonyaka ophelileyo. Phakathi koYilo lwe-NFL lowama-2020 kunye nokusayinwa kwe-offseason, iiDolphins zineqela elihlaziyiweyo ngokupheleleyo elinetalente eninzi.
Baza kuba ngabalali kakhulu e-AFC East kulo nyaka. Nangona kunjalo, ngawo onke la macwecwe matsha, iMiami iya kudinga mhlawumbi ngomnye unyaka ngaphambi kokuba ibe lilungu elifanelekileyo lokuphumelela kolo hlaselo.
Iindaba ezimnandi kuMiami kukuba i-rookie QB Tua Tagovailoa iphumelele eyomzimba kwaye iya kukhuphisana kwindawo yokuqala ye-QB ngexesha lenkampu yoqeqesho.
NjengamaJets, iMiami idweliswe nge-Over / Under of 6.5 win. Ingaphezulu iyathandwa ngo-130. Ndilibona eli qela lijikeleze .500 kwaye andiyi kumangaliswa ukuba bathe bagqiba i-9-7. Nangona kunjalo, bendiya kumlumkisa nabani na ofuna ukutsiba kule mikhwa mikhulu. Eli qela lidinga ixesha elininzi lokuba babe kukhuphisana nabona.
Njengoko sele kukhankanyiwe, alikho elinye iqela kwiligi elibethwe kratya nangakumbi ngaphandle kweNew England Patriots. Kwaye, ayingomdlalo kuphela ogcina abadlali okanye amaqela eqela lokuzilolonga ahleli ngaphandle ixesha lonyaka, kodwa iziqalo eziphambili ezenza oko kwakhona.
Phambi kokuba sifike ngaphandle, masiqwalasele abadlali esele belishiyile iqela ngearhente yasimahla. Ewe kunjalo, sonke siyayazi ukuba uTom Brady uthathe iitalente zakhe waya eTampa Bay, kodwa yayingenguye yedwa oqala ukuhamba.
U-Kyle Van Noy kunye no-Elandon Roberts balishiya iqela kwaye baya ku-Miami weqela. UJamie Collins uthathe isigqibo sokubuyela eDetroit endaweni yokuhlala eNew England.
← Ukunyuka kweBaccarat ngokungekho mthethweni eTshayina → Iimpazamo ezi-7 zabahambi baseLas Vegas benza yonke imihla